January, 2020 | Job Vacancy in Myanmar
2020-01-31 19:03:22 , Job Training for Senior Accou…
Job Training for Senior Accountant
လုပ်ငန်းတခု ၏ စာရင်းအား အစသွင်းပုံမှအစကိုယ်
Financial Reporting ထွက်သည့် စာရင်းသွင်းပုံ အဆင့်ဆင့်ကို Excel ဖြင့် စာရင်းသွင်းနည်းများကိုသင်ကြားပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းတက်ရောက်လျှင် ရရှိနိုင်မည့် အကျိုးကျေးဇူးများ
၁။ အခြေခံ စာရင်းရေးသွင်းပုံအဆင့်ဆင့် ကို လက်တွေ့နားလည် သွားခြင်း (Knowledge of Accounting)
၂ ။ Chart of Accounts များ၊ Double Entery စာရင်းသွင်းပုံများ
၃ ။ Genergal Knowlwdge of source Doucument sများ(လုပ်ငန်းသုံးစာရွက်စာတမ်းများ)-Debit VR, Credit VR, Invoice etc.
၄။ Cash Book စာရင်းသွင်းပုံ (Cash in hand, Bank , USD $ ဖြင့် စာရင်းသွင်းပုံများ)
၅။ Pivot Table အသုံးပြု၍ Cash Report, Bank Report , USD Report များရေးဆွဲပုံ)
၆။Dairy purchase, Payment To vendor စာရင်းများ၊ Payable Report များရေးဆွဲခြင်း
၇။ Dairy Sale , Received from customer စာရင်းများ ၊ Receivable Report များကို Pivot Table ဖြင့် Repot ထုတ်နိုင်ခြင်း၊
၈။ကုန်ကျစရိတ်များ ၊ ကြိုတင်ငွေများ ၊ ချေးငွေများ ၊ ရရန်ရှိ ၊ ပေးရန်ရှိများအားလုံးကို သက်ဆိုင်စာရင်း ခေါင်းစဉ်များအောက်တွင် စနစ်တကျ စာရင်းသွင်းတတ်ပြီး၊ လကုန်လျှင် ကုန်ကျစရိတ်များကို ခေါင်းစဉ် အလိုက် စာရင်းထုတ်ပေးခြင်း ၊ ကြိုတင်ပေး ၊ ကြိုတင်ရ ၊ ပေးရန်ရှိ၊ ရရန်ရှိများကို စာရင်းထုတ်ပေးခြင်း များရေးသွင်းပုံ
၉။ Inventory and Cost of sale တွက်ပုံများ၊Closing Inventory တွက်ချက်ပုံများက်ို Vlookup အသုံးပြု၍ တန်ဖိုးရှာပုံများ
၁၀။ Consign Qty များ၊ Consign Sale Qty များတွက်ချက်ပုံများ၊ Consign Report များ
၁၁။ Journal Entry စာရင်းသွင်းပုံများ
၁၂။ Depreciation တွက်ချက်ပုံများ Formular များ။
၁၃။ Trial Balance ( အစမ်းရှင်းတမ်း ရေးဆွဲခြင်း)
၁၄။ Final Account လချုပ်၊ နှစ်ချုပ် ( statement of profit or loss & Financial Position ) များအထိ ရေးဆွဲနိုင်ခြင်း ။
၁၅။ ကုန်ပစ္စည်း အ၀င် အထွက် ၊ အရောင်း ၊ လက်ကျန် စာရင်းများကို စာရင်းသွင်းပုံ။
၁၆ ။Source Documents များကိုလိုအပ်သည့် အချိန်တိုင်းတွင် ရှာဖွေရလွယ်ကူစေရန်အတွက် စနစ်တကျ ထားနိုင်ခြင်း
၁၇။လုပ်ငန်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ ပိုင်ရှင်ထည့်၀င်သော Capital စာရင်းအားစနစ်တကျ စာရင်းသွင်းနိုင်ခြင်း
၁၈။ Non Current Assets list များကို စာရင်းသွင်းပုံများ။
၁၉ ။ Depreciation များကိုလည်း တွက်ချက်ပုံများ
REPORT ထွက်တဲ့အထိ အသေးစိတ် အစအဆုံးသင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀။ Tax Knowledge များ.အခွန်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များကိုလဲ ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂၁။ Financial Reoport အပြင် Term & Conditions များကိုလဲ အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် (eg- PO terms , QO terms)
၂၂။ Ethics of Accountants , Ethics of Cashier
စတဲ့ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာတွေပါ သင်ကြားပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
2.ပေးလိုက်သော အိမ်စာတွေကို မိမိ workbook(excel)သီးသန့်ထားရှိပြီး အိမ်စာလုပ်လာခဲ့ရပါမယ်
3. မလိုက်နိုင်တဲ့ စာတွေရှိရင် viber group ထဲမှာ စာမေးစာဖြေလုပ်လို့ရပါတယ်
5. ကျောင်းမလာဖြစ်ရင် ခွင့်တိုင်ပေးပါ အတန်းပျက်သွားတဲ့စာတွေအတွက် အချိန်ပိုခေါ်ရင်လာနိုင်ရပါမယ်
6. ကျောင်းသင်တန်း ခွင့်မတိုင်ပဲ ၂ကြိမ် ပျက်ရင် စာလုံးဝပြန်မသင်ပေးပါ
#သင်တန်းပြီးဆုံးပါက certificates များ ပေးအပ်ချီးမြင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်
ကျောင်းမှာ test 1ကြိမ် ဖြေဆိုရပါတယ် 1ကြိမ်မှာ အမှတ်အများဆုံးရရှိသူများ ကျောင်းတက်မှန်သူများကို အမှတ်တရ ဒိုင်းဆုများနှင့် ချီးမြှင့်ပေးမှာလဲ ဖြစ်ပါတယ် ??
နေ့ရက် ။ 1.2.2020(Saturday only)
အချိန် ။ နေ့လည် 6နာရီ မှ 8 နာရီအထိ
နေ့ရက် ။ 1.3.2020(Sunday only)
အချိန် ။ နေ့လည် ၃နာရီ မှ ၅ နာရီအထိ
သင်တန်းကာလ။ ။ ၂ လ
သင်တန်းကြေး။ ။ 75,000Kyats
#သင်တန်းကြေးကြိုတင်တစ်ဝက်ပေးထားရပါမယ်။နာမည်စာရင်းပေးပြီးပါက cancel လုပ်၍မရပါ။ စည်းကမ်းချက်များကိုဖတ်ပြီးမှသာ သင်တန်းလာအပ်ပါ။
နေရာ။? ။ ထူပါရုံ ၁၅ လမ်း အနောက် ၁ ရပ်ကွက်၊ သာကေတ မြို့နယ်။
�ဆက်သွယ်စုံစမ်းရန်။ ။ 09 974540895, 09699810930
This entry was posted in Training and Class on 2020-01-31 by admin.
2020-01-28 16:26:15 ,
This entry was posted in Training and Class on 2020-01-28 by admin.
2020-01-22 22:19:38 , #လယ်မှာကန်သင်း၊ #ကုန်သည်မှာစာရ…
#လယ်မှာကန်သင်း၊ #ကုန်သည်မှာစာရင်း ဆိုတဲ့ရေးစာရိုးစကားကို သင်သိပါသလား?
လယ် တစ်ကွက်မှာ ကန်သင်းရိုးမရှိရင် လယ်ပျက်စီးနိုင်သလိုပဲ
လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာလဲ ထိုနည်းအတူ စာရင်းအင်းကိုသာ သေချာမလုပ်ထားရင် ပျက်စီးနိုင်တယ်လိုဆိုပါတယ်။
#အဓိကပြောချင်တာက လုပ်ငန်းရှင်တစ်ချို့ကဆိုရင် လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ရာ Our Vision , Mission ရှိဖို့က အဓိကလို့ မှတ်ယူကြပါတယ်။
သို့ပေမယ့် သူ့တို့မေ့နေ့ကြတာက လုပ်ငန်းရဲ့အသက်ဖြစ်တဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာတွေ လုပ်ငန်းမှာ အသုံးပြုလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ စတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကသာ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမရှိလျင် နောက်လုပ်ငန်း အောင်မြင်ဖို့ရာ မလွယ်ကူနိူင်ပါဘူး။ ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာက စာရင်းပညာရပ်သည် လုပ်ငန်း၏ #အသဲနှလုံးလို့ပြောရင်မမှားနိုင်ပါဘူးနော်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ စာရင်းပညာရပ်များနှင့်တကွ စာရင်းပညာရှင်များကိုပါတန်ဖိုးထားဖို့လဲ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
စာရင်းပညာရှင်များအနေနဲ့လဲ မိမိပညာရပ်ကို ပိုပိုသိကျွမ်းအောင် ထပ်ထပ်လေ့လာသင့်ပါတယ်။
အခုစာရေးသူကိုယ်တိုင်လဲ အမြဲအပြတ်လေ့လာနေသလို သိသမျှလဲ Sharing လုပ်ပေးပါအုန်းမည်။
This entry was posted in Training and Class on 2020-01-22 by admin.
2020-01-16 17:54:46 , Plz admin ‘ ပညာေခတ္မွာပညာရွာ…
‘ ပညာေခတ္မွာပညာရွာမယ္ ”
အမွန္တကယ္ စာေတြ႕ လက္ေတြ႕ Presentation
ေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္သင္ၾကားခ်င္တဲ့ သူေတြအတြက္
ေအာက္ပါ Link တြက္လဲနာမည္စာရင္းေပးသြင္းနိုင္ပါသည္
– 09 764158055 – 09 978902345 ကိုဆက္သြယ္ စုံစမ္းနိုင္ပါတယ္။
This entry was posted in Training and Class on 2020-01-16 by admin.
2020-01-16 07:27:03 , Job Training for Senior Accou…
၁၅။ Ethics of Accountants , Ethics of Cashier
စတဲ့ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာတွေပါ သင်ကြားပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
နေ့ရက် ။ 1.1.2020(Saturday only)
အချိန် ။ နေ့လည် ၁၁နာရီ မှ ၁ နာရီအထိ
2020-01-12 15:21:06 , Hello January 25,26ဖြင့္မယ့္ T…
Hello January 25,26ဖြင့္မယ့္ Timetableအသစ္
သင္ဘဝေျပာင္းလဲခ်င္ရင္ ပညာပါရမီ တာေမြမွာသင္တန္းလာတက္ပါ
သင္တန္းေၾကး29000နဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္သံုး Certificatesလဲရ
တစ္ဘာသာအပ္လိုက္တာနဲ႔ Free Class, Free Seminarေတြကို ရာသက္ပန္တက္ရမွာမို႔အျမန္ဆံုးလာအပ္မွ စိတ္ခ်ရပါမယ္
January 23 ရက္ေန႔ ထက္ေက်ာ္လြန္ပါ းရပါမယ္
This entry was posted in Training and Class on 2020-01-12 by admin.
2020-01-06 08:59:48 , Job Training for Senior Accou…
နေ့ရက် ။ 11.1.2020(Saturday only)
အချိန် ။ နေ့လည် ၁နာရီ မှ ၃ နာရီအထိ
နေ့ရက် ။ 12.1.2020(Sunday only)
This entry was posted in Training and Class on 2020-01-06 by admin.
2020-01-02 16:08:21 , Share ခြင့္ျပဳပါ႐ွင့္
This entry was posted in Training and Class on 2020-01-02 by admin.
2020-01-02 07:42:25 , Job Training for Senior Accou…